လင်းဦး(စိတ်ပညာ) _ Lin Oo: ကျွန်တော်နှင့် ထိုုပြဿနာများ
ကျွန်တော် ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော့် Gmail ကို တစ်ယောက်ယောက်ကတော့ Hack ထားတယ်ဆိုတာ… ။ အဲ့ဒီပြောခဲ့တုန်းကတော့ တော်တော်များများက မယုံကြပါဘူး။ အခုတော့ ကိုယ်တိုင် ကြံုတွေတော့မှ သူတို့က ယုံသွားကြတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်ကတည်းက Gtalkမှာ ကျွန်တော့်မပြောဘဲ သူ့ဟာသူ အော်တို ပြောနေတာကို ကြံုခဲ့ရတာပါ။ secondary mail ထားသလားဆိုတော့ ကျွန်တော် မထားပါဘူး။ ကျွန်တော်blogspot ကလည်း ဒီအကောင့်နဲ့ပဲ လုပ်ထားတာပါ။
ပထမပိုင်းတုန်းကတော့ blogspotထဲကို ဘာမှ မလုပ်သေးပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်း အထဲကိုပါ၀င်ပြီး လုပ်ကိုင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်မပြောတဲ့စကားတွေကို ပြောလို့ ဖျက်ခဲ့ရပေါင်း မနည်းတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ password ကို ခဏ ခဏ ပြောင်းခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူက ၀င်နေတာပါပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က G talk ဖွင့်ထားပေမယ့် စကားပြောတာနည်းပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်တွေရအောင် ဖွင့်ထားတာများပါတယ်။ အဲ့ဒါကို ကျွန်တော်နဲ့ Addထားတဲ့သူတွေ အသိဆုံးပါ။ ကြာလာတော့ ကျွန်တော် စိတ်ညစ်လာမိပါတယ်။ ၂၂ ရက်နေ့တုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။ သူ့နဲ့ Chat နေကျ လူတစ်ဦးနဲ့ ပြောနေရာက ထိုလူက စကားလုံး ရိုင်းရိုင်းများသုံးလာပါတယ်တဲ့။ သူက ကျွန်တော်ပြောတာ ကြားဖူးနေတော့ နည်းနည်းတော့ ထိတ်လန့်သွားမိပါတယ်တဲ့။ ပြီးတော့ နောက်ဆုံး တစ်ဖက်လူမှ သူ့ကိုသူ Hackerကွလို့ ပြောသွားပြီး ထွက်သွားပါတယ်တဲ့။
ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို Hackလို့ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးများ ရနိုင်မလဲလို့ပေါ့။ စမ်းပြီးလုပ်နေတာလား။ တစ်စုံတစ်ရာ အကြောင်းကြောင့်လားပေါ့။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ နည်းပညာပိုင်မှာ အားနည်းပါတယ်….။ Hacker ? Hack တယ်ဆိုတာ ကြားတော့ ကြားဖူးပါတယ်။ တကယ် အပြည့်အစုံကိုတော့ မသိပါဘူးခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ပြောတာတွေက လူပိန်းပြောတာတွေပါ။ သိတယ်ဆိုရင် ပြောသွား၊ ထောက်သွားကြပါ။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့ လူတော်တော်များများ အခု ထောက်ခံနေကြပါပြီ။ မထောက်ခံလို့လည်း မရတော့ဘူးလေ။ သူတို့ကိုယ်တိုင် Hack ခံထားရတာကိုး။ အဲ့တော့ ပြောချင်တာက အခုမိတ်ဆွေရဲ့ ဘေးက သူငယ်ချင်းကိုလည်း မေးကြည့်ပါဦး။ Hack ခံထားရသလားဆိုတာ။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ညစ်စရာတွေများလာတော့ အခုတစ်လော မရေးဖြစ်တော့ဘူး။blog တွေကို မလည်ဖြစ်တော့ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တော်တယ်၊ Hackerလို့ ခံယူထားတယ်လား။ ဒါဆို ကျွန်တော်နဲ့ အပြင်မှာ တွေ့ချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျား မကျေနပ်တာတွေကို ပြောစမ်းပါ။
နောက်ပြဿနာတစ်ခုက ကျွန်တော် ပြည်ကောလိပ်မဂ္ဂဇင်းမှာ ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာရှည် ပြဿနာတစ်ခုပါ။ ကဗျာနာမည်က “အသည်းလော့ကတ်သီးလေးနဲ့ လည်ဆွဲလေး” ပါ။ အဲ့ပြဿနာကတော့ မဂ္ဂဇင်းတိုက်နဲ့ရှင်းရမှာပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကျန်းမာရေး သိပ်မကောင်းပါဘူး။ မကောင်းတာကလည်း ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မဆင်ခြင်လို့ ဖြစ်တာပါ။ ကျွန်တော် ကော်ဖီနဲ့ လက်ဖက်ရည် အရမ်းသောက်ပါတယ်။ တော်တော်လေးကိုများပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ကော်ဖီမစ်တွေကို သောက်တာပါ။ တစ်နေ့ကို (၁၀)ထုပ်လောက် သောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ တစ်နေ့တာသောက်တာပါ။ တစ်ခါတစ်လေ အဲ့ထက် ပိုသောက်ပါတယ်။ ကော်ဖီစွဲသွားရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ၊ ကျွန်တော်တို့တွေ သီးချင်းတွေရေးကြတယ်၊ ဆရာ့အိမ်မှာ လေ့လာကြတယ်။ ကိုယ့်အားလပ်ချိန်ကလည်း ညကျမှဆိုတော့ အိပ်ငိုက်မှာဆိုးလို့ ကော်ဖီတွေသောက်တာကနေ အကျင့်ပါသွားတာပါ။ ပြီးတော့ မသောက်ရရင် မနေနိုင်တော့ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတော်တော်များများက ပေါ့ဆိမ့်လိုမျိုး အသောက်များပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ချိုဆိမ့် သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ကြိုးစားပါဦးမယ်။ ဆက်ရေးဖြစ်အောင်ပေါ့။ ကျွန်တော်က အမြဲတမ်းရေးနေရမှ ကျေနပ်တာ။ နောက်ထပ်တစ်ခု ပြောချင်ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကျွန်တော့် blogspot ပိတ်ခံရခြင်းပါ။ ဟ……. ခင်ဗျား တစ်ယောက်တည်း ပိတ်တာမှ မဟုတ်တာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်သူမှ တိုက်ရိုက်ကြည့်လို့မရဘူး……… အဲ့လိုမျိုး ပြောကြမှာပါ။ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ထက် ကျွန်တော်က ပိုဆိုးပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှ မဖွင့်ပေမယ့် ဖွင့်ပေးထားတဲ့ တစ်နေရာကတော့ ရှိပါတယ်။ အားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ ဖွင့်ပေးထားတဲ့ နေရာကတောင် ကြည့်တာတောင် ကျွန်တော့် blogspot ဖွင့်လို့မရပါဘူး။ ကျန်တဲ့ မိတ်ဆွေများ blog တွေကို ဖွင့်ကြည့်ပါတယ်။ အားလုံး ပွင့်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေ ဖွင့်လို့မရတဲ့ blogspotတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ကိုရန်အောင် blogပါ။ ကျန်ပါသေးတယ် ။ မရေးပြတော့ပါဘူး။
တစ်နေ့က ကျွန်တော့်ဦးလေးမိတ်ဆွေနဲ့ စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဦးလေးက ကျွန်တော့်မေလ်းနဲ့ သူ့ဆီ မေလ်းပို့ခဲ့တာပါ။ ဒါနဲ့ သူက ကျွန်တော့်ကို G Talk မှာ Add လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲ့မှာ မင်းက အွန်လိုင်းမှာ ဘာတွေလုပ်နေတာလဲလို့ မေးပါတယ်။ ကျွန်တော်က blogရေးနေပါတယ်လို့ ဖြေလိုက်တော့….. သူက ပြန်ပြောပါတယ်။ blog ရေးတာ အစိုးရက မကြိုက်ပါဘူးတဲ့ ခင်ဗျာ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို blogရေးတာ ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကို ကျူးလွန်နေသလိုမျိုး ပြောပြနေပြီး မရေးဖို့ ပြောပါတယ်။ ဆက်မရေးဖို့ပါ။
ဒီရက်ပိုင်း ပြဿနာတွေကတော့ တော်တော်လေးကို စိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဆက်ရေးဖို့တော့ ကြိုးစားမှာပါ။
By လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Monday, June 30, 2008